Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti oo maanta booqasho ku tagaya Hargeysa | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti oo maanta booqasho ku tagaya Hargeysa
Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti oo maanta booqasho ku tagaya Hargeysa
Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti C/qaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagi doona magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale, taasoo noqoneysa booqashadii u horeysay oo mas’uul sare oo ka tirsan Jabuuti ku tago maamulka Somaliland.
Booqashada Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti ayaa lagu tilmaamay in aanay aheyn mid siyaasadeed, balse lagu sheegay inay tahay booqasho uu ugu tagayo dadka ay ehelka yihiin oo ku nool Sanaag bari iyo ceerigaabo.
Illaa afar Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Jabuuti ayaa shalay gaaray Hargeysa, kuwaasoo horu-dhac u ah wafdiga Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti.
Wasiirka Kaluumeysiga Somaliland Cali Jaamac ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti uu tagi doono Ceerigaabo iyo Sanaag bari, isla markaana u tagi doono tolkiisa.
“Waxaan ku soo dhoweyneynaa, shaar dowladnimo iyo shaar reernimo, Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti tolkiisa ayuu u imaan doonaa oo degan Sanaag Bari iyo Ceerigaabo”ayuu yiri Wasiirka Kaluumeysiga Somaliland.
Previous articleKumanaan Arday oo maanta u fariisanaya Imtixaanka mideysan ee shahaadiga
Next articlePlease rescue our son, family pleads after Al Shabaab video